YEC | Learning Center
Diploma in International Financial Reporting (IFRS) – ACCA
F3 Financial Accounting – ACCA (Part-I)
Diploma in Marketing, IQN (UK)
Certified Strategic Manager, IQN (UK)
Welcome to Y.E.C Learning Center!
Y.E.C Learning Center သည် မန္တလေးမြို့အခြေစိုက် စီးပွားရေး နှင့် စီမံခန်.ခွဲမှုဘာသာရပ်များ ပို့ချပေးနေသော Education Center တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 1st June 2015 တွင် Dr. Phyo Paing မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုဆိုလျှင် ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ်ငန်း၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ company အသီးသီးမှ သင်တန်းသားပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကို ပို့ချသင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
Y.E.C Learning Center သည် City of Oxford College မှ Diploma in Business and Management နှင့် Diploma in Banking ကို ပို့ချပေးလျက်ရှိသော၊ မန္တလေးမြို့မှ တစ်ခုတည်းသော Center ဖြစ်ပါသည်။
International Diploma Course @ Y.E.C Learning Center
လေ့လာလိုသော နိုင်ငံတကာဘာသာရပ်များကို အောက်ပါ Button များနှိပ်၍ အသေးစိတ်ဝင်ရောက်လေ့လာစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ မရှင်းလင်းသည်များရှိခဲ့ပါက ရုံးချိန်အတွင်း သင်တန်းကျောင်း၏ ဖုန်းနံပါတ် (သို့) Facebook Messenger တို့မှတဆင့် ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Y.E.C Learning Center
ပထမထပ်၊ ရာဇာစင်တာ၊ ဗန်းမော်တိုက်လမ်း၊ ၇၁ လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
ဖုန်းနံပါတ် : ၀၉ ၇၉ ၄၄ ၆၁ ၈၈၈
အောင်မြင်တဲ့သူတွေ တစ်ပတ်ကို (၁၀) နာရီလောက် သူတို့ရဲ့ အလုပ်တွေကို ဘေးချပြီး အချိန်တွေကို ဘယ်မှာမြှုပ်နှံကြလဲ
လူတော်တော်များများ သာမန်အဆင့်ပဲ ဖြစ်နေချိန်မှာ ဘယ်အရာက တစ်ချို့လူတွေကို ကမ္ဘာကျော် ခေါင်းဆောင်တွေ စွမ်းဆောင်ရှင်တွေ တီထွင်သူတွေ ပြောင်းလဲသူတွေ ဖြစ်စေတာပါလဲ။ အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ urgent work တွေကနေ ခဏနားပြီး သူတို့အတွက် ဗဟုသုတ creativity နဲ့ energy တွေ...
တစ်ရက်တာအတွက် မနက်မှာပြုလုုပ်တဲ. ၁၀ မိနစ်ဟာ အသက်ပါ။
Motivated ဖြစ်ချင်ရင် စာအုုပ်ဖတ်နေရုုံနဲ.မရပါဘူး။ သင်တန်းတက်ရင် တစ်ပတ် နှစ်ပတ်သာခံပါတယ်။ Jim Rohn ပြောသလိုု Motivation ဆိုုတာရေချိုးသလိုု နေ.တိုုင်းလုုပ်ဆောင်ပေးရပါတယ်။ နေ.စဉ် Motivated ဖြစ်အောင် ဘာတွေလုုပ်မလည်း? Priming မနက်ထထချင်း မိမိကိုုယ်စိတ်နှစ်ပါး peak...
အောင်မြင်သူတို့ရဲ့ မနက်ခင်းမှာ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့အလေ့အကျင့်တွေ
PEST analysis ကို အဆင့် ၅ ဆင့်နဲ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲ။ (External Environment Analysis)
စက်ရုံအတွင်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဓလေ့တွေက company တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ အများကြီးအရေးပါသလို အပြင်ကအကြောင်းအရာတွေကလည်း အရေးကြီးတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေက ကိုယ့်စီးပွားရေးရဲ့ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအရေးပါနေသလဲဆိုတာကိုတော့ PEST (Political, Economic, Social and Technological)...
ဆရာကောင်းလွန်းရေးသားတဲ့ Porter’s5Forces
(Industrial Analysis - External Business Environment Analysis တွင်ပါဝင်သည်။) Poter’s5Forces သီအိုရီ နဲ့ စားသောက်ဆိုင် လက်မလည်အောင် ရောင်းကောင်းနေတဲ့ စားသောက်ဆိုင်မှာ ပြသနာမရှိဘူး လို့ ထင်ရင် မှားမှာပေါ့ဗျာ..။ ဝင်ငွေ ကောင်းနေတိုင်း စိုပြေပြည့်စုံနေတာ မဟုတ်ပါဘူး..။...
ဘာတွေလိုအပ်ပြီး ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်လဲဆိုတာ သိရင်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုစတင်ဖို့ မခက်ပါဘူး။
သိန်း ၁၀၀ အောက်လုပ်ငန်းဘယ်လုပ်ငန်းတွေမဆို 1. Product or Service 2. Marketing နှစ်ခုလိုတယ်။ Product နဲ့ Service ကို ဝယ်ရောင်းပြန်လုပ်မှာလား? ဒါမှမဟုတ် ဘာ Value-added ပြန်လုပ်မှာလည်း ဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Service အနေနဲ့ Skill ကို ပြန်ရောင်းမှာလား?...
YEC Facebook Page
Y.E.C Learning Center သည် မန္တလေးမြို့အခြေစိုက် စီးပွားရေး နှင့် စီမံခန်.ခွဲမှုဘာသာရပ်များ ပို့ချပေးနေသော Education Center တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 1st June 2015 တွင် Dr. Phyo Paing မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုဆိုလျှင် ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ်ငန်း၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ company အသီးသီးမှ သင်တန်းသားပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကို ပို.ချသင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
Challenger Brand ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုလဲ ???